Follo: Aabe qirtay qeyb kamid ah isku deyga dilka gabadhiisa. - NorSom News
Follo: Aabe qirtay qeyb kamid ah isku deyga dilka gabadhiisa.
Maxkamada Follo ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwad ka dhan ah aabe iyo afar xubnood oo qoyskiisa kamid ah, kuwaas oo ku eedeysnaa isku dil oo lakula kacay gabar uu aabaha eedeysanaha dhaley.
Aabaha 47 sano jirka ah oo asal ahaan kasoo jeedo dalka Afgaanistaan, ayaa qeyb ahaan qirtay danbiga isku deyga dilka ah ee lagu eedeeyay. Inkasta oo uu iska fogeeyay eedeynta ah in ujeedkiisu uu ahaa inuu gabadhiisa dilo.
Gabadha uu odeyga dhalay, ayaa xiligaas jirtay 18 sano. Waxeyna ka badbaaday labo mindiyood oo lagu dhuftay. Waxeyna xeer ilaalintu ay sheegtay in falkaas kahor, ay gabadhaas la kulantay jirdil iyo tacadi kaga imaanayay labadeeda waalid, walaasheed iyo labo wiil oo la dhalatay.
Xeer ilaalinta ayaa kiiskan usoo bandhigay, inuu kamid yahay gaboodyada la xiriira sharaf ilaalinta qoyska(æresvold). Waxeyna sheegeen in gabadha ka badbaaday isku deyga dilka ah, ay kasoo guurtay guriga qoyska, ayna yeelatay saaxiibo Norwiiji ah, dhaqankana Norwiijigana ay baratay. Taas oo ka careysiisay qoyska gabadha dhalay, ugu danbeyna keenay falka isku deyga dilka ah ee gabadhu ay ka badbaaday.
Qareenka u doodayo qoyska, ayaa dhankiisa sheegay in falka dhacay uusan wax xiriir ah la laheyn ilaalinta sharafta qoyska, balse uu ahaa mid iskiis ah u dhacay, xiriirna aan la laheyn arinta ay xeer ilaalintu qoyska ku eedeysay. Aaabaha qoyska ayaa sidoo kale sheegay inay xiligaas heysteen cadaadis uga imaanayay meelo kale.
Qoyska maxkamada lasoo taagay ayaa Norway qoxootinimo kusoo galay sanooyin kahor.
Xigasho/kilde: Far erkjenner delvis skyld for drapsforsøk på datteren
Previous articleGoormee la ogaan doonaa soomaalida soo gashay golayaasha deegaanka?
Next articleSoomaalidan ayaa ilaa hada soo gashay goloyaasha deegaanka magaalooyinka Norway:
Oslo: Shir boolis la isugu wacday oo maanta ka dhici doono masaajidka soomaalida ee Tawfiiq.
83 qof oo shaley helay covid-19: Tiradii ugu badneyd tan iyo bishii April.
Norway: Dowlada oo dadka kula talineyso inaysan dibadda u safrin.
Keydka NorSom Velg måned august 2020 (18) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (62) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (40) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)